बच्चाको उपचारमा इसान बाल तथा महिला हस्पिटल नं. १, यस्ता छन् सेवा सुविधा : डा.आर.पी चौधरी – Ishan Hospital
काठमाडौं – जनकपुरमा जन्मिएका आर पी चौधरी पेशाले डाक्टर हुन । चिकित्सा सेवामा लामो समयसम्म अनुभव बटुलेका उनले विभिन्न देशका कुना कुनामा रहेका बालबालिकाहरुको सल्यक्रिया गदै आएका छन् । अहिले उनी इसान बाल तथा महिला हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । यो क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव संगालेका उनै डा.चौधरीसंग अंकुरण खबरका लागि अनिता मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः लामो समय भयो बाल सल्य चिकित्सकको रुपमा काम गरेको कस्तो अनुभव हुन्छ ? करिब आदि उमेर चिकित्सा सेवामै समर्पित भयो । त्यसमा पनि बाल सल्यक्रिया मेरो रोजाई र रुचीको बिषय हो । सायद यही भएर पनि हुनसक्छ, कत्तिपय अवस्थामा तिता अनुभव हुँदाहुँदै समग्रमा भन्दा यो पेशामा सन्तुष्ट छु । बाल शल्य चिकित्सक भएर मृत्युको मुखमा पुगेका बच्चाहरुलाई बचाउँदा आफु र आफ्नो पेशाप्रति धेरै गौरब लाग्छ । कति वर्षसम्मको सल्यक्रिया बाल सल्यक्रिया अन्तर्गत पर्दछ ? नवजात शिशुदेखि अठार बर्षसम्मका बालबालिकामा गरिने सबैखाले सल्यक्रियालाई बालसल्यक्रिया भनिन्छ । त्यतिमात्र नभएर आमाको गर्भमा रहदा पनि हामीले हेर्छौ । केही समस्याहरु छ भने त्यसमा हामीले जन्मनुभन्दा पहिले नै परामर्श दिन्छौ । बच्चाको अवस्था कस्तो छ । त्यो बच्चालाई जन्माउन मिल्छ कि मिल्दैन रु जन्मिसकेपछि सल्यक्रिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रु त्यस्तो कुराहरु पनि हामी गर्छौ । तर जन्मनु भन्दा पहिलेनै गर्ने सर्जरीलाई फिटल सर्जरी भनिन्छ । म अमेरिकामा तालिम लिदाखेरी आमाको गर्भलाई खोलेर त्यो सानो बच्चालाई झिक्यो । त्यो बच्चाको सल्यक्रिया गरी फेरि बच्चालाई गर्भमा राखेर सिलाइयो । तर त्यो सुबिधा हाम्रो देशमा छैन् । बाल सल्यक्रियालाई जटिल सल्यक्रिया पनि मानिन्छ ,के कस्तो अवस्थामा सल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ ? सबै सल्यक्रिया जटिल हुन्छ भन्ने हैन् । रोगको अवस्थामा निर्भर रहन्छ । यद्यपी बच्चाहरुको शारीरिक बनावट, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता सबै हिसाबले अलि जटिलता हुन्छ । बच्चालाई बाल सल्यचिकित्सकलाई देखाउने बित्तिकै सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने हैन । कतिपय समस्याहरु औषधि खाएर मात्र पनि निको हुनसक्छ । कतिपय केसहरु सल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने भए पनि सर्जरी नगरिकनै केही समय पछि आफै ठिक भएर जान्छन । त्यस्तोलाई सर्जरी गर्न पर्दैन । सल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कसैलाई तुरुन्त नगरिनहुने हुन्छ त्यसलाई हामी इमेर्जेन्सी भन्छौ जसलाई तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि, भख्खरै जन्मेको बच्चाको आन्द्रा निक्लिएको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । भख्खरै जन्मेको बच्चा छ त्यसको खाने नली र श्वास नली सँगै जोडिएको छ, केटाहरुको अण्डकोष बट्टारिको छ भने त्यस्तो केशलाई तुरुन्तै सल्यक्रिया गर्नुपर्छ । केही समयको ढिलाइले बच्चाको ज्यान नै जान सक्छ । बिरामीलाई निमोनिया, ट्युमर भएको हुन्छ त्यस्तो अवस्था सर्जरी गर्न मिल्दैन् । हामी सबै रोग पत्ता लाएर मात्र अप्रेसन गर्छौ त्यो प्लान अप्रेसनमा पर्छ । केही दिन वा केही महिनासम्म कुर्न मिल्छ त्यसलाई प्लान सर्जरी भन्छौ । बच्चाको सल्यक्रिया गर्दा पनि असफल भएका धेरै घटना बाहिर आउछ । किन यस्तो हुन्छ ? सल्यक्रिया भनेको एउटा टिम वर्क हो । म जतिसुकै अनुभवि र राम्रो बच्चाको शल्य चिकित्सक हुँ भनेर मात्र पनि हुदैन् । त्यसमा बच्चालाई बेहोस गर्ने चिकित्सक पनि त्यतिकै अनुभवि हुनुपर्छ । सल्यक्रिया गर्ने औजारहरु, औषधिको गुणस्तर सबै राम्रो हुनुपर्छ । नर्सहरु पनि उत्तिकै क्षमतावान हुनुपर्छ । सबै कुराको राम्रो प्रवन्ध भए मात्र सल्यक्रिया सफल र प्रभावकारी हुन्छ । हो, बेलाबेलामा यस्ता अप्रिय घटनाहरु बहिर आउने गरेका छन् । कुरा हटाउन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । बच्चाको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने यान आइ सि यू ,पि आइ सि यू लगाएतका आवश्यक उपकरण सबै भएका अस्पतालमा सल्यक्रिया गर्दा यस्तो समस्याबाट केहीहदसम्म जोगिन सकिन्छ । यी सबै सुविधा इसान बाल तथा महिला हस्पिटल बसुन्धारामा उपलब्ध छ । बाल सर्जरी भन्ने बित्तिकै आभिभावकहरु डराउने, सर्जरी गर्न नमान्ने हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? एकदमै गाह्रो हुन्छ । कुनैपनि आमा बुवा अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै राजी हुदैनन् । बच्चाको सर्जनको काम खाली अप्रेसन गर्ने मात्र हैन । हाम्रो दायित्व भनेको बच्चालाई भएको रोगको बारेमा पूर्ण रुपमा अभिभावकलाई मौखिक जानकारी गर्ने, कम्प्यूटरबाट देखाउने, आजकाल त युट्युबबाट देखाउने र उहाँहरुलाई पढ्नुस् भनेर भन्ने हो । त्यसैले जसरी पनि उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । कमियूनिकेसनको महत्व छ त्यो पनि एउटा अनुभवी र राम्रो सर्जन छ भने उहाँहरुलाई बुझाउन सक्छ । त्यो हाम्रो दायित्व हो । तपाइ त लामो समय सरकारी अस्पतालमा काम गरेको चिकित्सक, सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइदैन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । के साच्चै त्यस्तै हो त ? मैले कान्ति बाल अस्पतालमा धेरै समय काम गरे । बच्चाकै लागि विशेष खोलिएको कान्ति बाल अस्पतालमा विपन्न,असाहय व्यक्ति मात्र कान्तिमा आउछन भन्ने हैन् । सम्पन्नशाली व्यक्तिहरु पनि त्यहाँ उपचारको लागि आउछन् । सरकारी अस्पताल हो समय समयमा केही समस्याहरु आउछन् । चाहेर पनि छिटो गुणस्तरीय सेवा दिन सकिदैन् । तर बिस्तारै सरकारी अस्पतालहरुमा पनि सेवा सुविधा सेवाग्राही मैत्री बन्दै गएका छन् । तपाई इसान बाल तथा महिला हस्पिटलको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ रु यो अस्पतालले के कस्तो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ? इसान बाल तथा महिला हस्पिटलले अहिले २५ औ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुरुमा इसान बाल नर्सिङहोम भनेर खोलिएको थियो २०५२ सालमा । यो अस्पताल १५ बेडबाट सुरु गरेर २५ बेडसम्म भयो । त्यसपछि आमा सँगसँगै प्रसुति सेवा सुत्केरी सेवा पनि भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर बाल नर्सिङहोम तथा महिला प्रसुति गृह भनेर हामीले खोल्यो । त्यसपछि अहिले यो बिल्डिङमा बसेका छौ । भुमम्प पश्चात यो सरकारी स्टेक स्टक्चनले गर्दा यो भवनमा थप सेवा दिन नमिल्ने बेडहरु बढाउन नमिल्ने भएको छ । त्यसैले हामी बाध्य भएर अब आफ्नै बिल्डिङ यसको ठिक २५० मिटर पछाडि आठ तले भवन बनाउन सुरु गरेका छौ । हामीले दिइरहेको सेवामा बाल रोग सम्बन्धि सम्पूर्ण सुविधा छ । बाल नबजात शिशु सेवादेखि लिएर अठार वर्षसम्मको बच्चाको सर्जरी हुन्छ । प्राय जसो इसान बाल तथा महिला अस्पतालमा बच्चाको मात्र नभएर यहाँ २४ सै घण्टा प्रसुति सम्बन्धिको सेवा पनि दिइराखेका छौ । स्त्रीरोगको सेवा पनि वरिष्ठ स्त्रीरोग डक्टरहरुबाट दिएका छौ । हामी कहाँ मल्टिडिसिपेनरीको टिम छ । बच्चामा चोटपटक लाग्ने धेरै हुन्छ सो यहाँ बच्चाको हाड जोर्ने सेवा देखि लिएर छाला तथा यौन रोग सम्वन्धिको सेवा, दन्तसेवा, नाक कान घाटीको सेवा, नसा सम्बन्धिको सेवा पनि हामी दिदै आएका छौ । त्यस्तै भि आर अल्टा«साउण्ड गर्ने फ्यासिलिटि, स्पेसल्ली एक्सरे गर्ने, २४ सै घण्टा प्याथोलोजी सेवा र एकदमै मोर्डन इक्यूमेन्ट सहित नबजात यान आइ सि यू लाई सघन कक्ष उपचार साथै सबै उमेरकालाई होल बडि चेकअपको सुबिधा पनि हामी कहाँ छ । यस अस्पतालले भबिष्यमा के कस्ता सेवा सुविधा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ? हाम्रो अस्पतालमा देशैभरबाट बिरामीहरु आउने गर्नुभएको छ । यसको कारण राम्रो सेवा सुविधा नै हो । हामीले समय सापेक्ष सुविधा बिस्तार गर्दै लगेका छौं । नयाँ योजनाहरुमा पेट काटेको अप्रेसन गर्ने डिमान पनि लिएर आउछ । ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी , नवजात शिशुको पिसावको बाटोमा पर्दा हुन्छ दुर्विनहरुले गर्न सक्ने यूरो सर्जरी जुन मूत्रसम्वन्धि सर्जरीहरु छ । त्यसमा आधुनिक मेसिनहरु ल्याउने योजना गरिरहेका छौ । त्यस्तै बच्चा नभएका महिलाहरुको लागि आइ भी एफ क्रृतिम तरिकाले बच्चा गर्भमा राख्ने कुराहरुको लागि पनि परामर्श सेवा सुरु गर्ने छौ । यहाँ जति पनि सुबिधाहरु छन त्यसमा अझै थप सुबिधा ल्याउने छौ । अहिले पनि इन्टरनेटबाट हेरेर इन्डिया समेतका मान्छेहरु इसान बाल तथा महिला अस्पतालमा सर्जरी गराउन आएर गएका छन् । त्यसैले हामीले कोसिस गरि रहेका छौ अबको दुई वर्षपछि एउटा मल्टि डिसिपिलीनरी बच्चाको लागि नमुनाको रुपमा राम्रो हस्पिटल बनोस त्यो हामीले चाहाना र योजना राखेका छौ । अन्त्यमा बाल सल्यक्रियाको बारेमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? नेपालमा म पहिलो क्वालिफाइड एम एस पेडियट्रिक सर्जन हुँ । अहिले पनि मलाई लाग्छ देशभरीमा बीस बाइस भन्दा बढी बाल सल्य चिकित्सकहरु छैनन्। त्यसमा पनि राम्रो ठाउँबाट टे«निङ लिएको राम्रो अनुभव भएको हुनुपर्छ् । बच्चाको सेवा बच्चाकै हस्पिटलमा बेस्ट हुन्छ । जतिसुकै ठूलो एडलको हस्पिटल छ भने पनि जो बच्चलाई दिन सक्ने सुबिधा बच्चाको हस्पिटलले मात्रै राम्ररी दिन सकिन्छ । त्यसैले यहाँ त्यो सम्वन्धिको सबै सुबिधा इसान बाल तथा महिला हस्पिटलमा छ । कान्तिमा काम गर्दा कति पेडियट्रिक सर्जनहरुले यो नपढ पनि भन्नु भएको थियो । तर मैले समस्यासंग जुध्न सक्ने मानिसनै सफल हुन्छ भनेर यो काम गर्न सक्छु भन्ने चालेन्ज लिए र आज एउटा सफल बाल सल्य चिकित्सकको रुपमा स्थापित भए । यो नै मेरो जीवनको ठुलो खुसी हो ।